Dhul Gariir ka Dhacay Dalka Tansaaniya – Saraar Media
Home›All War›Dhul Gariir ka Dhacay Dalka Tansaaniya
Last Updated on September 11th, 2016 at 06:04 pm
Dhul gariir xaddigiisu gaarsiisan yahay 5.7 ayaa shalay ka dhacay dalka Tanzania kaasoo dilay ugu yaraan 13 qof. Waxaa sidoo kale dhulgariirkaa ku dhaawacmay dad tiradoodu boqol sare u dhaaftay. Hayadaha dawliga ah ee dalkaa ayaa sheegay in dhul gariirku ka dhacay xadka dalkaasi la wadaago Rwanda gaar ahaan meel u dhow harada Lake Victoria.
Magaalada Bukoba ee Tanzania ayaa waxaa dhaawacyo soo gaareen dhismeyaal badan.
Gudaha Kenya dhanka galbeed, cabsi ayaa dhalatay kadib markii guryo ay ruxmeen, kadib wax lagu tilmaamay dhulgariir kadib saamayn soo gaartay ilaa Kenya-waa saamaynta dhulgariirkaa ka dhacay Tanzania.
Guryaha ayaa ruxmay deegaanada Kakamega, Bungoma, Trans-Nzoia, Vhiga iyo Siaya. Qof goob joog ahaa oo kusugan magaalada Bungoma ayaa sheegay in guri dabaq ah uu ruxmay ilaa dhowr daqiiqo! Wuxuu intaa ku daray qofkaasi in dadkii gurigaa kujiray ay cabsi darteed dibada u yaaceen!
Wararka qaar ayaa sheegaya in dhulgariirku sidoo kale asiibay dalalka Rwanda iyo Uganda ayadoo bu’da dhulgariirkana lagu tilmaamay inay tahay magaalooyinka Kagera iyo Rakai oo dhaca Uganda.
Gudaha Kenya ayaa waxaa gariir laga dareemay walow sida kan Tanzania uusan u cusleyn Kisumu, Siaya, Homa Bay iyo Migori abbaare 3:30 galabnimo ee shalay.
Dhulgariirka ayaa qeybaha kale ee Kenya ee laga dareemay waxaa kujira Korsirai, Mosoriot, Kabiyet, Eldoret, Kitale, galbeedka Pokot iyo Elgeyo Marakwet.
Xisbiyada Somaliland oo ku kala Aragti Duwanaaday ...
Madaxweynaha Somaliland oo Hambalyada Ciida u Direy ...